Wararkii Ugu Dambeeyey Shirka Golaha Amniga Qaranka Oo Ka Furmaya Baydhabo – Goobjoog News
Maanta oo Isniin ah ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu si rasmi ah uga furmo shirka golaha amniga qaranka, kaasi oo ay ka qeybgalayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waxaa Baydhabo ku sugan madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, Ra’iisul wasaare Kheyre iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Shirka golaha amniga qaran ayaa looga hadli doonaa arrimaha ammaanka dalka, dib u dhiska ciidanka, dib u eegista waxyaabihii ka qabsoomay shirkii kan ka horreeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo arrimo kale.
Ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey, waxaana xiran waddooyinka qaar ee magaaladaasi.
Waxaa magaalada Baydhabo lagu arkayaa ciidamo aad u badan oo K/galbeed, DFS iyo AMISOM isugu jira, kuwaasi oo amniga xaqiijinaya.
Dhanka kale, waxaa xalay magaalada Baydhabo ka dhacay kulamo gaar gaar ah oo ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana looga hadlay xiriirka DFS iyo maamul goboleedyada.
Meydka Ruux La Garan Waayey Oo Lagu Arkay Hilwaa, Muqdisho
Darawal Mooto Bajaaj Oo Lagu Dilay Muqdisho